ဘာသာပေါင်းစုံ ငြိမ်းချမ်းစွာ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေး၊ မီဒီယာကကာကွယ်​ စောင့်ရှောက်ပေး | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ၁၇၉၉ ခုနှစ်ကတည်းက ရိုဟင်ဂျာ အမည်နှင့်လူမျိုး ရှိကြောင်း…
OIC ရုံး ဖွင့်လှစ်ရန် ပြည်သူ နှင့် သံဃာတော် အချို့ စိုးရိမ်နေခြင်းအပေါ် OIC ပြောကြား »
ဘာသာပေါင်းစုံ ငြိမ်းချမ်းစွာ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေး၊ မီဒီယာကကာကွယ်​ စောင့်ရှောက်ပေး
Source: ဘာသာပေါင်းစုံ ငြိမ်းချမ်းစွာ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေး၊ မီဒီယာကကာကွယ်​ စောင့်ရှောက်ပေး M-Media စနေမောင်မောင် (ဘားမား)
၁။ မြန်မာနိုင်ငံ မှုခင်းသတင်းထောက်လောကမှာ စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ်အပြင် အခါအားလျော်စွာ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့လေ့ကျင့်စီမံ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကိုပါ နာခံပြီးသတင်းရေးကြရတယ်။ အားကစား၊ ကျန်းမာရေး၊ ဂမ္ဘီရ စသဖြင့် ဂျာနယ်အမျိုးမျိုး ဖတ်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်တွေထဲမှာ မှုခင်းသတင်း ဝါသနာရှင်တွေကို ထောက်ပြပြောဆိုရမယ်ဆိုရင် မှုခင်းသတင်း တစ်ပုဒ်မှာ တရားလို၊ တရားခံရဲ့ မိဘနာမည်၊ ဘာသာ၊ လူမျိုး ရေးသားဖော်ပြခွင့် မပြုဘူး။ ဆိုင်ကယ်၊ ကားနံပါတ် မဖော်ပြရဘူး၊ အဆုံးစွန် ဆုံးက အလိုမတူဘဲ သားမယားပြုကျင့်ခံရတဲ့ ၃၇၆ အမှုတွေမှာ နစ်နာသူအမျိုးသမီး ပျို၊ အို၊ ကြီး၊ ငယ်ရဲ့ နာမည်နဲ့ နေရပ်ဖော်ပြခွင့် မရှိဘူး၊ မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်မှာ ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် ဘာမြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်လို့ဘဲ ရေးပြရတယ်။
၂။ မှုခင်းသတင်းရဲ့ အလိုက်အထိုက် ဖော်ပြလို့မရတာတွေကို သတင်းထောက်က ဖော်ပြရေးသား သတင်းတင်ပြလာရင်တောင် တာဝန်ခံ အယ်ဒီတာ၊ တာဝန်ခံ စာတည်းချုပ်တွေက ဖြုတ်ထုတ်ဖြတ် လုံးဝလုပ်ရတယ်။ ခြေချော်လက်ချော် ဖော်ပြမိတာမျိုး ဘယ်တုံးကမှ မပေါ်ပေါက်ခဲ့ဘူး။ အလကား ပေါ်ပေါက်လို့ ရမလား၊ စာပေစီစစ်ရေးကို ဖြတ်ကြရသကိုး။ ဒီဟာတင်ပြနေရတာက မှုခင်းရှုထောင့်၊ မှုခင်းသတင်း၊ တကယ့်ဖြစ်ရပ်၊ မှုခင်းသတင်းနဲ့ခရိုင်းမ် ဆိုတဲ့ တရားဝင် မှုခင်းသတင်း ဂျာနယ် လေးစောင်ကို မပြတ်ဖတ်ရှု ဆန်းစစ် သုံးသပ်ပြီး အဲ့ဒီက ထင်ပေါ်တဲ့ ရလဒ်ကို သုံးသပ်တင်ပြတာပါ။
၃။ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ သတင်းထောက်တို့ လိုက်နာရေးသားရတဲ့ စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ်နဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေ ခပ်သိမ်းကို တစ်ထိုင်တည်း ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ် စည်းပျက်ကမ်းပျက် ချိုးဖောက်ဖော်ပြခဲ့တာကတော့ မြန်မာ့အလင်း၊ ကြေးမုံနဲ့ မြဝတီ စတဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းစာတွေပါ။ ပထမဆုံး ကျင့်ဝတ်ချိုးဖေါက်တာပါ။
၄။ မှုခင်းသတင်းဖော်ပြရာမှာ ကပ်စေးအနဲဆုံး ၂ လက္မ၊ ၃ လက္မထက် စာမျက်နှာ လုံးဝပိုမပေးတဲ့ အဓိက သတင်းစာတွေမှာ မှုခင်းသတင်းလေးပုဒ်ကို သတင်းစာ တစ်မျက်နှာလုံး လေးပိုင်း ပိုင်းပြီးတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ သတင်းလေးပုဒ်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ရခိုင်အရေးအခင်းရဲ့ စနက်တန်ချိန်ကိုက်ဗုံး သတင်းပါ၊ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အချိန်မရလို့ ဆိုတဲ့ ဝိနည်းရှောင်လို့ ရရိုးထုံးစံ မရှိခဲ့ပါဘူး။ တာဝန်ရှိသူက တာဝန်ရှိသူပါ။
၅။ ဒီလေးပိုင်းပိုင်း သတင်းတွေထဲမှာတောင် ကျောက်နီမော် သတင်းတစ်ပုဒ်က လွှဲရင် ကျန်သုံးပုဒ်မှာ တရားလို၊ တရားခံတွေရဲ့ မိဘအမည် ဘာသာ၊ လူမျိုး မဖော်ပြဘဲ၊ ကျောက်နီမော်သတင်း တစ်ပုဒ်ကိုသာ ရင်ထုမနာ စုတ်တစ်သတ်သတ် ဖြစ်ရအောင် အတုံးလိုက် အတစ်လိုက် တစ်တစ်ခွခွ တမင်သက်သက် ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ရေး ပျက်ပြားအောင် ဆင်ကြံကြံပြီး တက်သစ်စ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံရဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ရိုက်ချိုး ဖျက်ဆီးဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဒီရိုက်ချက်တွေဟာ မီဒီယာလောကသားတွေက သက်သေခံ ရှာဖွေတွေ့တယ်။
၆။ မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးက ထမင်းစားတာမို့ ခွေးလှေးခုန်လို့ ဖုန်မထဖြစ်တော့ မဆီမဆိုင် လက်ပံသားဓါးနဲ့ချိုင်ပြီး တရားစခန်းဝင်ပြီး ပြန်လာတဲ့ တောင်တွင်းကြီးသားတွေကို သာသနာ့အာဇာနည်ဘွဲ့ ပေပြီးစတေးပစ်ခဲ့တယ်။ အိမ်ကြက်ခြင်း အိုးမဲသုပ် အခွပ်ခိုင်လို့ ရခိုင်အရေးအခင်း ထောင်းလမောင်း ထလိုက်တာ ပြန်လည် ထူထောင်ရေး အတွက် ပြည်တွင်းအလှူရှင်တွေက ငွေသားတင် အလှူငွေစာရင်း (သတင်းစာအရ) သုံးကုဋေကျော် လှူဒါန်းခဲ့ရတယ်။ ဒါလုံလောက်ပြီလား၊ အဝေးကြီး။ နိုင်ငံတကာက အကူအညီတွေ ပေးနေပေမယ့် ဒါလည်း မပြည့်စုံသေးဘူး။
၇။ ချောင်ကြိုချောင်ကြား၊ မြို့စွန်မြို့ဖျား၊ ဆိုင်ကယ်တိုက်သတဲ့ဆို ဖြတ်ကနဲရောက်တတ်တဲ့ နယ်ထိန်းစွန်ရဲတွေ ထုံမွှန်းထားတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ တရားစခန်းပြန် ဆယ်ဦးတင်မက စီးလာတဲ့ကားကိုပါ မှုန့်မှုန့်ညက်ညက်ချေတာ ၃ နာရီနီးပါးမှာ ပြည်သူ့အသက် အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို လုံခြုံရေးကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ ကူညီပါရစေတွေ မထိန်းနိုင်လို့ လက်ပိုက်ကြည့်နေရတာမျိုး သမိုင်းအမည်းစက် မဆိုးသင့်ဘူး၊ မစွမ်းထင်းသင့်ဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခါကို မငြိုးနွမ်းစေသင့်ဘူး။ သိသိကြီး ဗြောင်ဥပဒေချိုးဖေါက် မျက်ကွယ်ပြုတာ။
၈။ မြန်မာနိုင်ငံ ထာဝရတည်ငြိမ်အေးချမ်းပါစေ။ ဒီလိုလူအချင်းချင်း နှိပ်စက်ခြင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ၊ ပပဉ္စဝါဒီ၊ နာဇီလက်သစ်တွေ ဒါရိုက်တာအဖြစ်မှ ကင်းရှင်းကြပါစေ။ ဘာသာပေါင်းစုံ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်ရေး ထွန်းကားပြန့်ပွားပါစေ။
၉။ ရခိုင်အရေးအခင်းကို ဖန်တီးတဲ့ ဒါရိုက်တာတွေ တာဝန်ရှိသူတွေကို လက်သည်တရားခံအစစ်က ဘယ်သူလဲ၊ မြင်အောင်ကြည့်ပြီး နောင်ကျဉ်အောင် ဖော်ထုတ်အရေးယူနိုင်မှ ဥပဒေစိုးမိုးပြီလို့ ဆိုနိုင်မှာ ဖြစ်သလို ဒါမှလည်း နိုင်ငံတော်နဲ့ နိုင်ငံသားတွေ နစ်နာအောင် လုပ်ဝံ့သူတွေ မပေါ်ပေါက်မှာပါ။ ဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ တန်းတူညီမျှရေးဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့ အုတ်မြစ်ပါ။
၁၀။ ဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့ ရခိုင်အရေးခင်းဟာ ဘယ်သူတွေက ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မနောကံ၊ ကံသုံးပါးလက်တွေ့ပယောဂနဲ့ ဘာကြောင့် ထုဆစ်ခဲ့ရတာလဲ၊ ဆန်းစစ်ကြည့်ကြစို့။ ပျားတစ်စက်နဲ့ ပြည်ပျက်အောင်၊ ဆင်ကြံကြံသူတွေဟာ ဘယ်သူတွေလဲ။
၁၁။ စနေမောင်မောင် ၁၉၆၄ ခုနှစ်ထဲမှာ လမ်းစဉ်ပါတီထုတ် နိုင်ငံတကါရေးရာဂျာနယ်မှာ ဖတ်ခဲ့ရဘူးတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံထဲမှာ လူဦးရေ အများဆုံးက ရှမ်းလူမျိုးတဲ့၊ အဲ့ဒီလူဦးရေ သန်းနှစ်ဆယ်ကာလက (ရှမ်း) တိုင်ရင်းသား သုံးသန်းရှိပြီး၊ လူဦးရေအနည်ဆုံးက ကရင်နီ(ကယား) လူမျိုး။ ဒီတုံးက လူဦးရေကိုးထောင်တဲ့။ အဲ့ဒီတုန်းက မြန်မာမွတ်စလင် ၆ ဒသမ ၅ သန်းရှိသတဲ့။ လင်ယူသားမွေးထွန်ကားတဲ့ လောကမှာ ကိုယ်စီ လူဦးရေပေါက်ကွဲပြန့်ပွားများပြားလာလိုက်တာများ (အမျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်ပါ) စာအုပ်ကို မင်းရဲနန္ဒကျော်ခေါင်၊ ကလောင်ပုန်းက နှစ်သန်း ရိုက်နှိပ်ပြီး အခမဲ့ ရဟန်းရှင်လူကို အလှူလှူခဲ့တယ်။ နိုင်ငံသား အားလုံးထဲမှာ မွတ်စလင်တွေကို ပစ်မှတ်ထားနှိပ်ကွပ်လာခဲ့တယ်။ ပညာရှိနှိပ်စက်နည်းနဲ့ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးတွေကို အာဏာနဲ့ အနိုင်ကျင့်ပြီး နိုင်ငံသားချင်း လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုမျိုးစေ့ ပျိုးခဲ့တယ်။
မင်းရဲနန္ဒကျော်ခေါင် နာဇီဟာ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယဉ်တွဲနေထိုင်ပြီး မြန်မာမင်းများလက်ထက်က သစ္စာရှိ နာခံတော်ကောင်းများအဖြစ် နေထိုင်လာတဲ့ မွတ်စလင်တွေကို တစ်ဖက်သတ် စွဲချက်တင်ပြီး မလိုမုန်းထားစိတ်နဲ့ (လူမြိုမှ လူမျိုးပြုတ်တယ်) မှိုင်းသွင်းခဲ့တယ်။ အရပ်ဆယ်မျက်နှာကို မေတ္တာပို့သံ ဓမ္မတေး လွှမ်းတဲ့မြန်မာပြည်မှာ မကြံစည်အပ်တဲ့ လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခကို စနစ်တကျ လျှို့ဝှက်ကြံစည်ပြီး မျိုးစေ့တွေ ပျိုးလာခဲ့တယ်။ ထေရဗုဒ္ဓဝါဒီ၊ သီလဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တဲ့ သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေက အာဏာရှင်တွေ အလိုကျ မကခဲ့ဘူး၊ သူတို့ရဲ့ အဓမ္မဝါဒကို ဓမ္မကရပ်တည်ပြီး၊ သတ္တဝါခပ်သိမ်း ငြိမ်းချမ်းရေးကိုပဲ ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ကြတယ်။
နေရာတကာမှာ အနိုင်ပိုင်းပြီး လူမျိုးကြီးဝါဒတည်ထောင်ရေး လျှို့ဝှက်လုပ်ရှားဆောင်ရွက်တဲ့ အာဏာရှင် အုပ်ချုပ်သူတွေရဲ့ နှစ်ငါးဆယ်ရွှေရတုလွန်ကာလမှာ သတ်သတ်မှတ်မှတ် အဓိကပစ်မှတ်ထားပြီး နှိပ်ကွပ်ခံနေရတဲ့ မွတ်စလင်တွေဟာ အကျယ်ချုပ်နဲ့ နေထိုင်ကြီးပြင်းလာနေရတယ်။ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ ရာထူး ဘက်စုံက ဖိနှိပ်ခွဲခြားခံရတယ်။ ဒါပေမယ့် လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ အနုပညာနဲ့ အားကစားစတဲ့ ကဏ္ဋစုံမှာ နိုင်ငံဂုဏ်ဆောင် အောင်ပွဲရအောင် မွတ်စလင်တွေလဲ တတပ်တအား အမှန်တကယ် ကြိုးစားခဲ့တာ သမိုင်းသက်သေ ရှိပါတယ်။
အခုလို ကောလဟာလ သတင်းလိမ်တွေနဲ့ ဒီခေတ်မှာလုပ်ကြံချင်လို့ မလွယ်တော့ပါဘူး။ ကမ္ဘာ့ရွာမှာ [IT] မျက်လုံး၊ နားတွေနဲ့ပါ။ အစစ်အမှန်တရားအရ ပြောရရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ မြန်မာ (ဗမာ) လူမျိုးပြီးရင် မွတ်စလင်ဟာ ဒုတိယလူဦးရေအများဆုံးပါ။ ကချင်၊ ရှမ်း၊ ချင်း၊ ကရင်၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ကယား စတာတွေထက် မြို့တိုင်းရွာတိုင်းမှာ ရှေးအစဉ်အဆက်နေထိုင်တွေ့ရှိနိုင်တာက အသေအခြာ မွတ်စလင်ပါ။ ကရင်မရှိတဲ့ အရပ်၊ ရှမ်းမရှိတဲ့အရပ်၊ ကချင်မရှိတဲ့အရပ်တွေ ရှိချင်ရှိမယ်။ မွတ်စလင် မရှိတဲ့အရပ်ဆိုတာ တွေ့ရဖို့ ရှားပါတယ်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံမှာ တစ်စုတစည်းထဲ သတ်မှတ်လူဦးရေရှိရင် လူနည်းစုလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၁ ယောက်နှုန်း သတ်မှတ်ချက်ရှိပေမယ့် သမိုင်းသက်သေတည် မွတ်စလင်များတဲ့ ရန်ကုန်မြို့က မွတ်စလင် လူနည်းစု လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒီနေ့လွှတ်တော်ထဲမှာ ရှိနေလို့လား။ မရှိပါဘူး၊ မပါအောင်လည်း အဲ့ဒီကျတော့ မွတ်စလင်က မြန်မာမို့ပါတဲ့။ နားလှည့်ပါးရိုက် ပြန်ပါလေရော။ ဒါဆို ဗမာတိုင်းရင်းသား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တိုင်း မွတ်စလင်တွေကို ကိုယ်စားပြုတာ မမေ့ဖို့ လိုပါတယ်။
*၂၀၁၄ မှာ မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ကြမယ်။ နိုင်ငံတကာက တက်သစ်စ ဒီမိုကရေစီမြန်မာနိုင်ငံတော်သစ်ကို နည်းပညာရော ငွေကြေးရော ဝိုင်းကူညီမယ်။ ကိုယ်တိုင်ပူးပေါင်း ကူညီမယ်။ စနစ်တကျ ဘိုင်အိုဂရဖ်ဖီတွေနဲ့ မှတ်တမ်းတင်မယ်။ အရှိကို အရှိအတိုင်း တန်ဘိုးထားမှတ်သားမယ်။ ဒါဆို မွတ်စလင်ဟာ တိုင်ရင်းသားတွေထဲမှာ လူဦးရေ အများဆုံး ပေါ်တင်ကြီးဖြစ်တော့မယ်။ ဒါကိုအစိုးရိမ်လွန်ပြီး လူမျိုးကြီးဝါဒီ အစွန်းရောက်တွေက လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခ ပွဲတိုက်ကြတာပဲ။
ကမ္ဘာမှာ၊ မြန်မာပြည်မှာ တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ် မူလ (၁၄၅ မျိုး)၊ နောက်ပြောင်း (၁၃၅ မျိုး)ထဲမှာ ဗမာလူမျိုးပြီးရင် ဒုတိယ လူဦးရေအများဆုံးက ဦးပိန် (တံတား)၊ ဦးရာဇတ်၊ ဦးရာရှစ်၊ ဦးခင်မောင်လတ်၊ ဆရာချယ်၊ ဗိုလ်မှူးဘရှင်၊ ဝတ်လုံဦးဖေခင်၊ ဝမ်းအိုဝမ်းဦးကျော်ဝင်းမောင် တို့လိုလူမျိုးတွေဆိုတာ သမိုင်းမှန်ကို ဘယ်လိုမှ ဖျောက်ဖျက်လို့ မပျောက်နိုင်တာကို စိုးရိမ်လို့၊ ဒါပေါ်တော့မှာ စိုးရိမ်လို့ ရခိုင်အရေးအခင်းနဲ့ ဆင်ကြံကြံ ဝိတ်လျှော့တာမျိုးပါ။
မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံး သတိထားကြဖို့လိုတယ်။ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဘာသာပေါင်းစုံ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်ရေး၊ နိုင်ငံသားတိုင်း နိုင်ငံသားကောင်းပီသရေး၊ နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးအပေါ် သစ္စာစောင့်သိ ကာကွယ်ရေး၊ အသိ၊ သတိ အလေးအနက် ထားရှိကြပါစို့လို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လျက်။ ။
(မြန်မာပြည်ကြီး ငြိမ်ချမ်းသားယာရေးနဲ့ ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါး အားလုံးလေးစားပြီး၊ ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ရေး၊ ဝိုင်းဝန်းကြိုးစားပေး)
This entry was posted on October 12, 2012 at 12:15 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.